Manova ny marika famantarana marika ho an'ny vanim-potoanan'ny coronavirus | ny mpanakanto Famoronana an-tserasera
Omaly dia nahalala momba ny foto-kevitry ny mpampiasa iray izahay amin'ny fanokanana ara-tsosialy ny sary famantarana Google, hanatonana ny tolo-kevitr'ireo mpanakanto hafa amboary indray ny mari-pamantarana famantarana ho an'ny vanim-potoana coronavirus.
Ary raha milaza isika fa izany dia noho ny zava-misy ity virus ity dia manova ny zava-drehetra ary mbola tsy fantatsika akory ny fiantraikany eo amin'ny fiarahamonina sy ny rafitr'ity tontolo ity amin'ny volana ho avy. Andao hojerentsika ireo tolokevitra feno fahendrena ireo mba hahitana ny fandraisana anjara lehibe amin'ny famoronana.
Jure Tovrljan no mpanakanto manana nalaina ireo sary famantarana famantarana ireo ary manaporofo ny zava-misy amin'ny halavirana ara-tsosialy hitantsika omaly mitovy amin'ny tolo-kevitra iray hafa ho an'ny Google. Ity mpanakanto ity dia milalao amin'ny habaka, sary ary marika hamoronana andian-tsarimihetsika manaitra sy mihantsy.
Afaka mahita ny sary famantarana mastercard na olympic, na ireo mitovy amin'ny NBA na Starbucks. Liana te hahafantatra ny mpilalao NBA rehefa nosoloiny ilay mpilalao basikety tao anatin'io kasety hafakely io mba hitondra azy any amin'ny solosaina finday. Sary mahaliana nefa iray izay mampiseho ny zava-misy amin'ny maro erak'izao tontolo izao.
Misy ihany koa ny sary famantarana ny Starbucks miaraka amin'io sarontava io izay mahatonga ny protagonism-ny amin'ny sary famantarana azy, na ny fomba nahatonga ny logo Goodyear ho lasa an'i Badyear. Manan-tsaina izy ireo ary mitovy fihantsiana. Mampihomehy ihany koa ny marika labiera malaza izay ahitanao "mila anarana vaovao."
Un fotoana tsy manam-paharoa amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona raha mijanona tsy miova ny zava-drehetra ary iza no tsy maintsy velona. Eto Madrid, avy aiza no anoratana ireo andalana ireo, mihidy ary tsy miala ao an-trano dia antenaina ihany fa tsy ho ela dia afaka hidina an-dalambe indray isika ary afaka mifampijery lavitra; Enga anie ka ho avy eo ny famihinana ary hiverina amin'ny laoniny ny zava-drehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Famantarana vaovao dia namboarina ho an'ny vanim-potoana coronavirus
Slack dia manambara ny fanavaozana ny lehibe indrindra hatramin'izay